CFM: “Tanjona ny tsy hisian’ny krizy” | NewsMada
CFM: “Tanjona ny tsy hisian’ny krizy”
“Fitazonana ny foto-kevi-dehibe ny satan’ny fitondran-tena nosoniavin’ireo kandidà tamin’ny fanombohan’ny fihodianana voalohany no tanjona. Ny hisian’ny fitoniana mba tsy hisian’ny krizy vaovao izany.”
Io ny nambaran’ny filohan’ny Komitin’ny fampihavanana malagasy (CFM), i Maka Alphonse, teny Ampefiloha, omaly, taorian’ny fihaonany tamin’ny delegasiona avy amin’ny Vondrona eoropeanina sy ny OIF amin’izao hiatrehana ny fifidianana filohan’ny Repoblika, fihodinana faharoa, izao.
Efa nihaona tamin’ny tanan-kavanan’ireo kandidà koa ny CFM mba hisian’ny fihaonana amin’izy ireo. Tsy misy olana tsy voavaha ao anatin’ny fifampirehasana. Mba tsy ho sanatria hiteraka krizy indray ny fifidianana. Mba ho tarafin’izao tontolo izao isika eto Madagasikara ka ho lesona amin’ny fifandimbiasan-toerana demokratika.
Hiroso amin’ny fifidianana isika ato ho ato, ka tonga eto ireo mpiara-miombon’antoka amintsika. Izay no nahatongavan’ny delegasion’ny Vondrona eoropeanina avy any Bruxelles nihaona tamin’ny filohan’ny CFM. Teo koa ny avy amin’ny Oif.
Mitovy ny tanjona: ny hiatrehana ny fifidianana madio, ary hoeken’ny rehetra ny voka-pifidianana. Ao anatin’ny tontolo milamina no hanatanterahana izany. Nankasitraka ny asan’ny CFM ry zareo, ary mirary ny hitohizan’ny fiaraha-miasa.